Git Forge: sevhisi yakatangwa naFedora neCentOS yekutambira mapurojekiti ako | Linux Vakapindwa muropa
Git Forge: sevhisi yakatangwa naFedora neCentOS yekutambira mapurojekiti ako
Vagadziri ndiani ari kumashure kwezvirongwa zvekuzivikanwa kweLinux "CentOS naFedora" yakaburitswa munguva pfupi yapfuura kuburikidza neshambadziro iyo sarudzo yekugadzira yekudyidzana yekusimudzira sevhisi, iyo inonzi as "Git Forge".
Iri sevhisi nyowani ichavakwa uchishandisa iyo GitLab chikuva inozova chikuva chikuru kubatana neGit repositori uye kuitisa mapurojekiti ane chekuita nekuparadzirwa CentOS uye Fedora.
Paunenge uchitarisa mhinduro dzinogona kuitika kune iyo nyowani Git Forge, Pagure uye Gitlab yakafungidzirwa. Kubva pane kudzidza angangoita mazana matatu ekuongorora uye mazano kubva kuFedora, CentOS, RHEL, uye CPE vatori vechikamu, mashandiro ezvidimbu akaumbwa uye sarudzo yakaitwa mukufarira Gitlab.
Mukuwedzera kune zvakajairika mashandiro ane zvinyorwa, kuchengetedzeka, kushandiswa uye kugadzikana kwepuratifomu zvakaziviswa pakati pezvakakosha zvinodiwa.
Izvo zvaidikanwa zvaisanganisira maficha senge kutumira zvikumbiro zvePush kuburikidza neHTTPS, zvinoreva ku chengetedza kupinda mushanduro, tsigiro yemhando dzakavanzika, share kupinda pakati pekunze nevashandisi vemukatis (semuenzaniso, kushanda kugadzirisa kusagadzikana panguva yechirango kuburitsa ruzivo nezve dambudziko), kubatanidzwa kwema subsystems kushanda nemishumo yedambudziko, kodhi, zvinyorwa uye kuronga kwezvinhu zvitsva, kuwanikwa kwezvishandiso zvekubatana neIDE, rutsigiro yeyakajairika workflows.
Pakati peGitLab maficha ayo akazochinja sarudzo kusarudza chikuva ichi, rutsigiro rwezvikamu zvidiki zvine mukana wekusvika kuzvitoro zvakataurwa, la mukana wekushandisa bot yekubatanidza otomatiki (CentOS Stream inodikanwa kutsigira mapakeji neiyo kernel), kuvapo kwezvishandiso zvakasanganiswa zvekuronga kusimudzira, mukana wekushandisa yakagadzirirwa-kushandisa SAAS sevhisi ine nhanho yakavimbiswa yekuwanikwa (inozosunungura zviwanikwa zvekuchengetedza sevha. zvigadzirwa).
Sarudzo yatove kukonzera kushoropodzwa pakati pevagadziri, maererano nenyaya yekuti sarudzo yakaitwa pasina kutanga kutaurirana.
Uyewo paive nekunetsekana kuti sevhisi yaisazoshandisa yemahara Comminity edition yeGitLab. Kunyanya, kugona kunodiwa kuita izvo Git Forge zvinodiwa zvakatsanangurwa muchiziviso zvinongowanikwa mune yechokwadi vhezheni yeGitLab Yekupedzisira.
Icho chinangwa chekutora mukana weSAAS sevhisi yakapihwa neGitLab (kunyorera sevhisi) yakashoropodzwa, pachinzvimbo chekushandisa GitLab pamaseva avo, nekudaro vachirasa sevhisi kunze kwekudzora (semuenzaniso, hazvigoneke kuve nechokwadi chekuti zvese zvinokanganisa mukati iyo sisitimu inogadziriswa nekukasira, zvivakwa zvinochengetedzwa nemazvo uye hapana kana nguva imwechete ye telemetry ichaiswa uye hunyanzvi nevashandi vechitatu-bato zvichabviswa).
Mhinduro yacho haina kukodzera zvakanaka neFedora Fundamentals, iyo inotsanangura kuti chirongwa chinofanira kupa sarudzo kune dzimwe nzira dzemahara.
Zvichakadaro, GitLab yakazivisa kuvhurwa kwekutumirwa kwe18 kunoshanda , que kumberi ivo vaingopihwa mune akabhadharwa edhisheni yeGitLab:
Kubatanidza nyaya inoenderana;
GitLab kuburitsa nyaya ku CSV.
Iyo nzira yekuronga, kuronga uye kuona muitiro wekuvandudza wezvimwe zvinhu kana zvaburitswa.
Yakavakirwa-mukati sevhisi yekubatanidza vechikamu vevatori vechikamu nevechitatu mapato kuburikidza neemail.
Webhu terminal yewebhu IDE.
Iko kugona kuyananisa mafaera kuyedza kodhi shanduko muwebhu terminal.
Dhizaini manejimendi manejimendi anokubvumidza iwe kuti uise dhizaini uye zviwanikwa zvechinetso, uchishandisa dambudziko senge poindi imwechete yekuwana kune zvese zvinodiwa kugadzira chinhu chitsva.
Yemhando yekubika kodhi.
Tsigiro yeConan (C / C ++), Maven (Java), NPM (node.js) neNuGet (.NET) mamaneja emapakeji.
Tsigiro yekuitwa kweCanarian, iyo inobvumidza iwe kuti uise vhezheni nyowani yekushandisa muchikamu chidiki chehurongwa.
Kuwedzera kwekuparadzira, kubvumira kutanga kuendesa mavhezheni matsva kweiyo shoma chete masisitimu, zvishoma nezvishoma kuunza kufukidza kune 100%.
Kushanda kwekushanda mireza, iyo inopa mukana wekuendesa chirongwa mune akasiyana edhisheni, zvine simba kumisikidza zvimwe zvinhu.
Kazhinji kuendesa nzira iyo inokutendera iwe kuti uongorore hutano hwese Kubernetes-yakavakirwa inoenderera yekubatanidza nharaunda.
Tsigiro yekutsanangura akawanda maKubernetes masumbu mune iyo configurator
Tsigiro yekutsanangudza chigadziko network chengetedzo marongero ayo anotendera kusiyaniswa kwekuwana pakati peKubernetes pods.
mabviro: Centos Blog - Fedora Blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Git Forge: sevhisi yakatangwa naFedora neCentOS yekutambira mapurojekiti ako
KUZIVA uye Kunaka: majee maviri eLinux ezuva raApril Mapenzi
openEuler 20.03 LTS: yekutanga official LTS vhezheni yeHuawei distro